About Us - Tianjin Wangtong Maindasitiri uye Trade Lifen zvizoro fekitori
Tianjin Wangtong Maindasitiri uye Trade Lifen zvizoro fekitoriari kuvaka pamusoro pe1998, ane makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo rwekugadzira zvipfeko mumusha. Tine nhoroondo refu yebhizimusi reOEM / ODM Chinangwa chedu ndechekuti vatengi vedu vangashandise zvigadzirwa zvedu.
Uye zvakare, yedu fekisheni sumo yemarudzi epamusoro-magumo michina yekugadzira, yakasarudzika mumarudzi ese ezvekugadzira zvigadzirwa, kugadzirisa. Tine zana mazana ezviuru ekirasi yekuchenesa musangano, inogona kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa munzvimbo yakanatswa.
Isu tine yakasimba R & D TIMU NEMAZIVO R & D zvivakwa. Master high-tech biochemical tekinoroji, nanotechnology, osmotic tekinoroji, yemvura kristaro microemulsion tekinoroji. Iye zvino tava nemhando dzinopfuura 2000 dzemhando yakura, zvigadzirwa zvinowirirana nekutarisirwa kumeso, kuchengetwa kwemuviri.
Nhasi, iyo pfungwa yekuchembera iri kuchinja sezvo tarisiro yehupenyu ichienderera ichiwedzera uye mararamiro achichinja. Ngatimbundirei pro-kukwegura kufamba muye indasitiri yerunako inogamuchira izvo chaizvo uye pamwe neizvozvo, runako rwekukwegura zvirinani.
Yedu R & D timu yakagadzira akateedzana ekuchengetedza kwakanyanya, kubvumidzwa, kunyorova zvirinani, zvinoitika zvakanyanya zvehunhu hwechimiro, izvo zvinosanganisa Chinese mishonga yemakwenzi, zvigadzirwa zvakaunzwa kunze, kuitira kuti zvive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinokodzera ganda rakapfava.
Zvakanakisa kupakata vagadziri, epamberi komputa software, Hardware michina, kupa yehunyanzvi kubvunza masevhisi, nyanzvi mabasa, mukurumbira wakanaka nechinangwa chekupa vatengi vane chokwadi, zvinogutsikana zvigadzirwa.
Strict manejimendi sisitimu yekuona mhando yeese maitiro. Nema mainjiniya mazhinji uye vaongorori vemhando yepamusoro, kuiswa kwevekunze-kirasi zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa kuti vaone zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.